Hanolotra tokim-pitiavana vaovao ny filohan’i Malawi amin’ny ‘Andron’ny mpifankatia’ · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Febroary 2010 8:41 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Swahili, বাংলা, Français, Español, English
Nandre ireo Malawita fa hanambady ilay Minisitry ny fizahantany taloha, Callister Chimombo ny filoham-pirenen'izy ireo Dr Bingu wa Mutharika amin'ny 1 May ho avy izao. Ialohavana fifamofoana araka ny fanao izany amin'ny andron'ny St Valentin [Andron'ny mpifankatia] , amin'ny 14 Febroary. Mpitoraka blaogy roa no nirary soa ny filoha tamin'ity tantaram-pitiavana vaovao ity taorian'ny nahalasan'ny vadiny Ethel, telo taona lasa izay.
Manoratra i Emmanuel Sobilika ao amin'ny Malawi Digest :
Tao amina fanambarana an-gazety tamin'ny Alarobia nalefa tamin'ny Malawi Digest, ny tao amin'ny Lapam-panjakana dia niteny fa mety hanambady an'i Chimombo amin'ny 1 May 2010 ny filoha Mutharika.
Kanefa, alohan'ny mariazy ara-panjakana, dia hisy fifamofoana araka ny fomban-drazan'izy roa ny 14 Febroary 2010. Io 14 Febroary io dia andron'ny St Valentin maneran-tany izay hankalazan'ny olona ny fitiavana miaraka amin'ny olon-tiany.
Manambara ny Fanjakana fa samy efa maty vady na i Dr Mutharika na i Callista Chapola Chimombo. Ny ao amin'ny Lapam-panjakana dia miteny fa samy Katolika Romana iringiriny i Dr Bingu wa Mutharika sy Chimombo.
Ny mpanao gazety Kondwani Munthali dia miarahaba ny filoham-pirenena amin'ny filazany azy:
Manome ohatra amin'ny fanambarana ampahibemaso ny fikasan'izy ireo hanao fanambadiana ara-pinoana, ary nanampy hoe manantena izahay fa hahita karatra fanasàna ka hizara ny sary amin'ireo namako eto.
Matetika dia hitantsika mipetraka eo akaikin'ny filoha foana i Callista amin'ny raharaha ofisialy. Teo aloha dia nandà ny fisian'ny tantaram-pitiavana izy. Ireo Tandapa koa dia nandà ny hanazava ny mikasika izany amin'ny “protocol” sy hanamarina ny fifaneraserana akaiky misy eo amin'ilay minisitra taloha sy ny filoha ao anatin'ny asan'izy ireo. Avy any amin'ny renivohitra ara-barotr'i Malawi any Blantyre, Richard Chirombo dia manoratra:
Nanomboka tamin'ny tapaky ny volana Desambra 2009 dia hita matetika teny akaikin'i Mutharika i Chimombo, toerana izay voatokana ho an'ireo mpiasam-panjakana ambony ao amin'ny governemanta sy ireo olona itokisana. Ho setrin'izay, dia niteny i Chimombo fa ny filoha ihany no mandidy izay tokony na tsy tokony hipetraka eo akaikiny, ary arak'izay voalaza izay dia “tombontsoany” ny namelan'i Mutharika azy hipetraka eo anilany.
Ity no fanambadiana faharoa ana filoham-pirenena tany Malawi taorian'ny an'i Bakili Muluzi tamin'ny 1999.